အင်္ဂလိပ်ဘာသာက တန်ဖိုးအများကြီးရှိတာပေါ့။ | White Boy Learning Burmese
June 6, 2013 by Win Hein	11 Comments
ကျွန်တော့် Facebookပေါမှာ Newsfeedကိုဖတ်ပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို link တစ်ခုပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီ linkက ဒီ ဓာတ်ပုံကိုညွှန်တယ်။
ဒီဓာတ်ပုံကိုတွေ့တော့ မယုံနိုင်ခဲ့ဘူး။ အထူးသဖြင့် မြန်မာလိုပြောတတ်တဲ့ အမေရိကန်လူမျိုးမို့လို့ ကျွန်တော်အတွက် ဒီဓာတ်ပုံက ထူးခြားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီပုံရဲ့စကားတွေဟာ မမှန်ဘူးလို့ထင်တယ်။
Commentတွေကိုကြည့်ရင် “မှန်လိုက်တာပေါ့”လို့ပြောတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုတွေ့မယ်။ ပြီးတော့လည်း “Imm, bcuz english is internationel language lay!!”လို့ပြောတဲ့လူများစွာကိုလည်းတွေ့မယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလောဂ်ကိုမလာဖူးဘူးလို့သေချာတာပေါ့။ ကမ္ဘာလုံးမှာ “_____လူမျိုးဟာ ______ဘာသာစကားလိုမပြောတတ်ဘူး”လို့ထင်တဲ့လူမျိုးအများကြီးရှိတယ်။ အဲ့ဒီအယူအဆ ရိုးရာပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူမျိုးစုံထင်တာက သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့ ဘာသာစကားဟာ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်လိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ဘာသာစကားမဆိုမှာ ခက်ခဲခြင်းတွေ နဲ့ ရိုးခြင်းတွေရှိမယ်။
လူတစ်ချို့ရဲ့စကားတွေဟာ မှန်တာပေါ့။ အင်္ဂလိပ်စကား… ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဘာသာစကားပါ။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဆေးအတတ်ပညာ၊ ဘာသာရေး၊ နည်းပညာအတတ်ပညာ၊ ပြီးတော့ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဟာ အများကြီးသုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာလုံးမှာ ဒီပညာနဲ့အရေးတွေအကြောင်း နားလည်စေချင်တယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုလေ့လာသင့်ပေါ့။ ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်ကို လေ့လာဖို့ ဘာသာစကားအားလုံးလှနီးပါးလို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးစာအုပ်တွေ၊ သင်ပေးဗွီဒီယိုတွေ၊ အတန်းတွေ၊ ကျန်ရှိရာ… ဖန်းတီးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ မြန်မာဘာသာအနေနဲ့တော့ အခြေအနေက ခွဲခြားပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေ မြန်မာပြည်ကိုရောက်ကတည်းက အနောက်ဘက်လုံးဟာ ဗမာနိုင်ငံအကြောင်းနည်းနည်းသိပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရမ်းငယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်မို့လို့ တရုပ်နိုင်ငံမှာထက်၊ အိန္ဒီယာနိုင်ငံမှာထက်၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာထက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးဝင်ခြင်းလျှော်ကြီးပါတယ်။ (အနောက်အဘက်အတွက်လို့ပြောနေတယ်နော်။) ဖြစ်နိုင်တာက တရုပ်နိုင်ငံ (သို့) ထိုင်းနိုင်ငံ (သို့) ရူးရှာနိုင်ငံ မှာ လူတစ်ချို့တွေ စီးပွားရေးအတွက် သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးအတွက်မို့လို့ မြန်မာဘာသာကိုလေ့လာကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ဗမာပြည်ကို ကိုလိုနီနယ်မြေ ထူထောင်ကတည်းက မြန်မာလူမျိုးများစွာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုလေ့လာခဲ့ပြီမို့လို့ နိုင်ငံများစွာအတွက် မြန်မာဘာသာကိုလေ့လာတာမလိုအပ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လောလောဆယ် ကမ္ဘာလုံးဟာ အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်နေတယ်။ ကျွန်တော်အတွက်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။
ကျွန်တော် မြန်မာဘာသာကိုလေ့လာနေတဲ့ အမေရိကန်လူမျိုးအနေနဲ့ ဒီဘာသာလို ကိုယ့်ရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်သလိုပြောချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာလူမျိုးသူငယ်ချင်းအများကြီးရှိပေမယ့်၊ ဗမာဘာသာအဘိဓာန်တချို့ရှိတယ်ပေမယ့်၊ မြန်မာသီချင်းတွေကိုနားထောင်ပေမယ့်၊ မြန်မာသတင်းစာကိုဖတ်ပေမယ့်၊ မပြည့်ပါဘူး။ အမေရီကန်နိုင်ငံမှာ ဂျာမန်ဘာသာ၊ စပိန်ဘာသာ၊ တရုပ်ဘာသာ၊ (သို့) ဂျာပန်းဘာသာကိုတောင် သင်ယူချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်စာအုပ်ဆိုင်မဆိုကိုသွားပြီးတော့ သင်ယူစလို့ရတယ်ကွာ။ ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ လွန်းခဲ့တဲ့၃နှစ်ကတည်းက ဗမာစာအုပ်၊ ဗမာသီချင်း၊ ဗမာအဘိဓာန်၊ ဗမာဗွီဒီယို၊ နဲ့ ဗမာသူငယ်ချင်းများစွာကို စုဆောင်းပြီ။ မြန်မာဘာသာကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် စာအုပ်ဆိုင်မှာ ဘာမှမရှိဘူးကွာ။ ထားပါတော့ အရမ်းလွယ်တဲ့စကားပိုဒ်စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိနိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုဘဲ။ ကျွန်တော်ထင်တာက မြန်မာစကားက အင်္ဂလိပ်စကားထက် တန်ဖိုးတကယ်ပိုကြီးတယ်ဆိုရင် တခြားနိုင်ငံကလူတွေအတွက် မြန်မာစကားကိုလေ့လာအောင် အားထားရာ ပိုများရှိအပ်တယ်။
ကျွန်တော့်ကိုနားလည်ကြဦး ကျွန်တော်ထင်တာက မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အင်္ဂလိပ်လို ကောင်းကောင်း မပြောတတ်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျွန်တော်ထက် အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ ပိုယဉ်းကျေးတယ်လို့ထင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ အစ်မ ချမ်းမြေ့ခိုင် ကျွန်တော်ထက် အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာ အကုန်အစင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မြန်မာလူမျိုးတိုင်း အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်လား။
မပြောတတ်ကြပါပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒါ့ဟာ သိပ်မဆိုးဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရဲ့ဘဝမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ မလိုအပ်ပါဘူး။ ကိုယ့်တို့ရဲ့မြို့တွင်တောင် အင်္ဂလိပ်လိုလုံးဝမပြောတတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ (အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေကြမို့လို့ သူတို့ရဲ့မသိခြင်းဟာ အံ့ဩစရာဘဲ။)
ဟိုးအရင်တုန်းက Latinaဘာသာစကားက နိုင်ငံရေးအတွက်၊ (အနောက်အဘက်မှာရှိတဲ့) ဘာသာရေးအတွက်၊ အနုပညာအတွက်၊ နဲ့ သိပ္ပံပညာအတွက် တန်ဖိုးအကြီးဆုံးတဲ့ ဘာသာစကားဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါနောက် ဘာဖြစ်မိလဲ။ Latinaဘာသာက သတ်တဲ့ဘာသာစကား (dead language) လိုဖြစ်ခဲ့ပြီ။ (ပါဠိဘာသာလိုပေါ့။) အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လည်းဖြစ်မယ်လို့မပြောနေဘူး။ ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး (ဗေဒင်ပညာကိုယုံကြည်ရင်တော့ သိနိုင်တယ် :P)။
ဆော်ရီ ကိုမောင်နီ။ ကျွန်တော်ထင်တာက ခင်ဗျားဟာ အရမ်းမှားသွားပါပြီ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစွာ တက်တဲ့ကြောင့် မြန်မာဘာသာထက် (အခုတော့) တန်ဖိုးပိုကြီးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မြန်မာဘာသာကိုချစ်သူတွေ (ကျွန်တော်လိုပေါ့) အမြဲတမ်း မြန်မာဘာသာကိုလေးစားပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြန်မာဘာသာဟာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘာသာစကားမဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အတွက် မြန်မဘာသာဟာ အမြဲတမ်း အမှန်ထက်ထူးဖြစ်ပါမယ်။
(ဣနြေ္ဒရရဖြင့်… မြန်မာဘာသာကိုလေ့လာဖို့ အားထားရာ ပိုများလုပ်ကြပါဦး)
11 thoughts on “အင်္ဂလိပ်ဘာသာက တန်ဖိုးအများကြီးရှိတာပေါ့။”
၀င်းဟိန်းရေ… အစ်မထင်တာတော့ အဲ့စာသားလေးက နောက်ပြောင်ပြီး ဟာသသဘောနဲ့ ရေးထားတာပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားရဲ့အသုံးဝင်ပုံနဲ့ တန်ဖိုးကြီးပုံကို မြန်မာတိုင်းနားလည်ပြီးသားပါ 😀
ဟုတ်တယ် အစ်မ။ ကျွန်တော် သိတာက အဲ့ဒီ ပုံက ဟာသသဘောနဲ့ရေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီပုံမှာ အချက်လည်းရှိပါတယ် 🙂
Pingback: Criticism | White Boy Learning Burmese
Maung Ni, the author of the remark in your screen capture, seems to be attemptingajoke. The little emoticon with its tongue sticking out at the end and the sign-off where he writes, “Come over here if you want to have fun!” suggest he’s being facetious. I wouldn’t take his words too seriously.
I don’t think anybody can logically argue that one language is more valuable or more worthy than another. (That’s kind of like saying “Blue weighs more than Red” or “Papaya is smarter than Coconut.”) Perhaps, in some circumstances, in some places, one language is more useful than the rest.
In the past four or five decades, Burma had been crippled by the military regime’s censorship. Talented Burmese — poets, writers, artists — either languished in prison or fled the country. Burmese language and literature couldn’t flourish under these circumstances. That probably explains, in part, why there are very few resources available for foreigners who want to learn Burmese.
I think you should be proud that, in spite of these limitations, you managed to become as fluent as you are in suchashort time. (I know many fellow countrymen who’d spent decades living in the U.S., working and going to school, yet still struggle to express themselves in English.)
If it were in my power, I’d gladly declare youahonorary Burmese. 🙂
၀င်းဟိန်းရယ်… အဲလိုအရာမျိုးက အရေးလုပ်ပြီးတောင် ပြောနေစရာမလိုပါဘူး…. သူက အပြောင်အပျက်ရေးတာပါ။ အပေါ်ကပြောသွားသလိုပဲ ဘယ်ဘာသာစကားမဆို သူ့နေရာနဲ့သူအသုံးဝင်တာပဲ… ဘယ်ဟာကပိုတန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတာ ပြောနေတာ… “အလုပ်မရှိ ကြောင်ရေချိုး” သလိုဖြစ်နေပြီ… ၀င်းဟိန်းက မြန်မာစကားကို အခက်အခဲတွေအများကြီးထဲက သင်ယူနိုင်တာကိုပဲ ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ….
အဲ့ဒီစာသားလေးက နောက်ပြောင်ပြီး ဟာသသဘောနဲ့ ရေးထားတာပါ ကိုဝင်းဟိန်း။ 🙂 မြန်မာဘာသာကို ရေးနှိုင်ပြောနှိုင်တဲ. အထိ လေ. လာထားတာ လေးစားပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ မြတ်သူရေ။ ဒါပေမယ့် ဟာသသဘောနဲ့ရေးထားတဲ့အရာတွေမှာ အမှန်တရားနည်းနည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်တွေ နဲ့ အယူအဆတွေအကြောင်းလည်း ဟာသလို ခဏခဏရေးထားကြပါတယ်။ သူရဲ့စကားတွေကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ချို့တွေဟာ သူ့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူခြင်းကို အမှန်တရားလိုသဘောကြမို့လို့ ကျွန်တော် ဒီပုစ်တ်ရေးထားပါတယ်။ 😀
Helen Yadanar Aung
မဗေဒါ ပြောတာကို ညီမလည်းထောက်ခံတယ် အစ်ကိုရေ.. မောင်နီဆိုသော သူ က အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ မျက်စိနောက်စရာ လေးတွေမြင်နေရလို့ ဟာသ,သဘော လှောင်ထားတယ်လို့ ညီမတော့ထင်တာပဲ.
များသောအားဖြင့် ညီမတို့ မြန်မာအချင်းချင်း တွေက အင်္ဂလိပ်စာ ပြောတတ်တဲ့ သူ အင်္ဂလိပ်စာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကို အထင်ကြီးကြတယ်. အထင်ကြီးသလိုပဲ တချို့ ဆို တော်တော် ကြိုးကြိုးစားစား သင်ကြတယ်လေ.. အဲ့ဒီလို ဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို အရမ်းအထင်ကြီးနေတဲ့သူတွေကို ဟာသရောပြီး “မင်းတို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အဖိုးတန်တဲ့ မြန်မာစာ ကို မေ့မနေ ကြနဲ့ဦး ” ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်……
ဒါမှမဟုတ် လည်း လုံးဝဟာသသက်သက် သဘောနဲ့လည်း ရေးထားတာ ဖြစ်နိုင်တယ် အစ်ကိုရေ…… 🙂
တကယ်တော့လဲ အဲ့ဓါတ်ပုံက စာလေးက ဟာသ သက်သက်ပါလို့ပဲ ရိုးသားစွာအကောင်းမြင်ပါရစေ .. ခက်တာက ထိန်းသီးကသူ့ဖာသာကြွေတဲ့အချိန်နဲ့ ကျီးကလဲ အတောင်ညောင်းလို့ နားဟန်တူပါနဲ့ .. ဒီလိုနဲ့ပဲ ခုလို ပို့စ်လေးတစ်ခု ဖြစ်လာတာနေမှာပါ … ကိုဝင်းဟိန်းရေ အကို့ရဲ့ မြန်မာစကားနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ခံစားမှုနဲ့ ကြိုးစားမှုကို ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ် .. အကို ဒီထက် မြန်မာစကား ပိုမိုကျွမ်းကျင်ပြီး ဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေ နာကြား ပွားများလို့ .. အက္ခရာဆိုတဲ့ ထောင်က လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ ..
ဣနြေ္ဒရရဖြင့် ( ဒီစကားလုံးလေးကို အတော်သဘောကျသွားပါတယ် )
November 29, 2013 at 07:38
ကိုဝင်းဟိန်းကို ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ် ။ နည်းနည်းလေးပဲ အယူအဆ လွဲသွားတာပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေ က တော်တော်လေး ပျော်တတ်ကြပါတယ်ဗျာ။ ကိုမောင်နီ ရေးတဲ့ စာပိုဒ်ကို မြင်ကတည်းက ဟာသ ရေးထားတယ်ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း နာလည်ကြပါတယ်။ စာပိုဒ်ရဲ့ အောက်မှာလဲ ရေးထားပါတယ် ။ ပျော်ချင်ရင် ဒီကိုလာ မောင်နီ တဲ့။ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ စကားရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကတော့ ပြောစရာမလိုအောင်ကို တန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ကောင်းကောင်းနားလည်ကြပါတယ် ။ ဆက်ပြီး လေ့လာပါဦး ။ အားပေးနေပါတယ်။